Sawiro: Booqashadii Reysulwasaaraha Ee Qardho. – SBC
Sawiro: Booqashadii Reysulwasaaraha Ee Qardho.
Posted by SBC Editor on July 18, 2015 Comments
Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland oo Booqday Tukaraq
Farmaajo oo kulamo wadatashi la qaatay odayaasha dhaqanka ee Caabudwaaq
Militariga Turkiga oo la wareegay Tuulooyiin ku yaalla Suuriya
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federalka Soomaaliya Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, oo booqasho ku jooga Puntland ayaa maanta booqday Xarunta Jaamacadda Bariga Africa oo si KMG ah ay u dagan yihiin Qaxootiga Yemen ee isaga soo cararay dagaallada ka soconaya dalkooda, waxana uu halkaas kula hadlay boqolaal kamid ah qaxootiga, isagoo u sheegay dowladda Soomaaliya in ay gacan siin doonto dadka reer Yemen ee ka soo cararay dagaallada ka socda dalkooda.
Ra’iisul Wasaare Cumar, ayaa sheegay Xukuumadda Soomaaliya in magaalada Qardho ay usoo diri doonto Xubno ka socda dowladda si ay ula socdaan baahida gaarka ah ee dadka soo Barakacay si gurmad ku filan loogu fidiyo, horeyna ay gacan u siiyeen xiligii dalkooda kasoo barakeen. Wuxuna mahadcelin u jeediyey shacabka iyo Maamulka Puntland, isagoo tilmaamay in uu aad uga xun yahay dagaalada ka dhacay dalka Yemen.
“Dalalka Soomaaliya iyo Yemen waa labo dal oo walaalo ah aadna isugu dhaw dhalasho ay ka dhaxayso, sidaas darteed waxaan rabbi uga baryayaa in dabka dagaalka uu ka damiyo, waxaan dhawaan soo diri doonaa guddi ka socda Hay’adda Qaxootiga Qaranka, kuwaas oo garab siin doona dadkan dhiban, Hay’adaha Caalamiga ah waxaan ugu baaqayaa in loo gurmado dadkan” ayuu yiri R/Wasaare Cumar.
Magaalada Qardho waxaa ku sugan Qaxooti gaaraya 400 oo kasoo barakacay dalka Yemen, waxana dib u dajin loogu sameeyey qaybo kamid ah Puntland Soomaaliya iyo deegaano kale. Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ku bixisay sidii Qaxootigaas ay u heli lahaayeen goobo ay dagaan iyo adeeg dhamaystiran.